Chikafu chakapfuma muvhitamini D3: Ona rondedzero nemunhu wese | 10000 wows!
Zvokudya	 9 January 2019
A vitamini d3 tenga icho chinodikanwa chevanhu vese, kunyanya vakadzi, uye chiripo muzuva rezuva. Iyi ndiyo nzira yakapusa yekuti uve nevhitamini D mumuviri wako, uchionekwa nezuva, panguva dzakaderera nguva uyezve unodzivirirwa kuitira kuti usatsva neganda. Nekudaro, kunyange vamwe vasingafunge, variko zvakare chikafu chakapfuma vhitamini d3 .
Mune inotevera misoro iwe unodzidza nezve iyi imwe nzira yekuwana vitamini D. Chikafu, mashandisirwo acho, zvimwe zvinovaka muviri zviri mazviri, uye rumwe ruzivo rwakakosha. Buda!
Chikafu chakapfuma muVitamin D3 uye Zinc
Zinc yakakosha munyu wemaminerari kune hupenyu hwehupenyu hwevanhu. Zvakangoitikawo, zvimwe zvekudya zvakapfuma muzinc pamwe ne vhitamini d3 mutengo . Idzi ndidzo nyama, kunyanya idzo dzinonyanya kurambwa neveruzhinji, senge nyama yemombe uye chiropa chehuku, oysters, sardines uye canned tuna, uye kunyangwe cod yechiropa.
Vitamin D3 10000 ui uye calcium
Calcium yakakosha pakushanda kweiyo-yakakosha gland gland, pamusoro pekusimudzira simba remapfupa emuviri wemunhu. Naizvozvo, chikafu chine calcium chakanyanya kudikanwa nevanhu.
Izvo zvinokwanisika kuwana muchikafu chimwe chete huwandu hwakawanda hwecalcium uye zvakare vhitamini D. Iyi ndiyo mamiriro emukaka uye zvigadzirwa zvemukaka, makedheni sardini, salmon, walnuts, chestnuts uye zvakare linseed.
Dzidza nezve kukosha kwevhitamini A!
Chinyorwa chezvakanakisa zvekudya zvakapfuma muvhitamini D
Zvikafu zvakanakisa zvako kuti uwane vhitamini D iwe yaunoda muzuva rako ndeaya:
Makedheni sardini uye tuna
Cod chiropa mafuta
Izvi ndizvo zvekudya zvakanyanya, izvo zvine vhitamini D yakawanda, asi hapana chimwe chazvo chinoshanda sezuva. Maminitsi makumi maviri ekuratidzwa kune chezuva panguva yezviitiko zvidiki zvakakwana kuti iwe uve neiyi vhitamini yakakosha muhuwandu hwakaringana hwehupenyu hwako.
Zvakare ziva zvekudya zvine vhitamini b12!
Vitamin D inodzora rinenge muviri wemunhu wese, saka kushomeka kwayo kunogona kukonzera kukuvadza kwakanyanya kumunhu, kusanganisira akakosha masystem senge emoyo.
Ndosaka kuve uine vhitamini D yakaringana kwakakosha kuti muviri wako ushande zvakanaka uye immune system yako kuti igare yakasimba uye ichishanda.
hazvina kukwana d3 vhitamini 10000 ui , iwe unokanganisa kuora mwoyo, matambudziko emapfupa, chirwere cheshuga, kurasikirwa kwesimba mhasuru, chirwere chemwoyo, dzihwa, dzihwa, autoimmune hosha uye kunyangwe chaiwo marudzi ekenza.
Mune vakadzi, kutarisisa uku kunofanirwa kuve kwakatonyanya kukosha. Kushaikwa kwevhitamini D kunokonzeresa njodzi kuvakadzi vane nhumbu, uye amai vanogona kuve nepamuviri uye kutogadzira hypertension muna amai, izvo zvine njodzi zvikuru panguva yekusununguka.
Chii chakaratidzwa huwandu?
Zuva rega rega, munhu anoda zviuru zvishanu kusvika zviuru gumi zvevitamin D pazuva. 5% yeiyi inowanikwa nekubata yakananga nezuva, iyo inofanirwa kunge iri yemazuva ese uye kweinenge maminetsi makumi maviri. Izvo zvese, zvine zvakajairwa, zvakaenzana, zvine hutano kudya, unogona kudya.
Chii chakanaka pakuwedzera vhitamini D?
Pamusoro pezuva uye chikafu chakapfuma muvhitamini D, imwe sarudzo inopfuudzwa kune vazhinji vakadzi vane nhumbu kutora vhitamini D yekuwedzera, yakagadzirwa murabhoritari. Izvo zvinobatsira kuchengetedza huwandu hwevitamini muhuwandu hwakakosha mumuviri wevakadzi pamwe nevarume.
Izvo zvakanaka ndezvekuti munhu anowana huwandu uhwu hwezvakakwana kubva kuzvikafu zvakapfuma muvhitamini D uyezve nekubata nezuva. Naizvozvo, kazhinji, iyo yekuwedzera inongoratidzwa chete kune vakadzi vane nhumbu, avo vanoda yakawanda vhitamini kuti vave nepamuviri pfava.
Ingotora chete vhitamini D yekuwedzera kana uchichida uye chiremba wako anokuudza. Zvikasadaro, iwe uri kuzoshandisa mari pasina. Nechikafu chakadzikama uye nekubata zvine mutsindo nezuva, huwandu hwevhitamini D hwatove hwakawanda kudarika iwe kuti uve nehupenyu hwakanaka uye hwakanaka, pasina kutya kwekufara.
Kana iwe uchine chero mibvunzo nezve zvekudya zvakapfuma muvhitamini D, siya mhinduro yako pazasi!
Mafuta eCopaiba: Ndezvipi zviratidzo zvekushandisa?
Erysipelas: Chii ichocho? Kurapa sei? Ndezvipi zviratidzo? Inotapurirana here?
Mishonga yekumba ye nzeve dzemusoro: Takasarudza zvinonyanya kushanda!